Ogaden News Agency (ONA) – Daawo: Mudane Jamaal Diiriye oo Waraysi Siiyay ESAT TV.
Daawo: Mudane Jamaal Diiriye oo Waraysi Siiyay ESAT TV.
Posted by Dulmane	/ September 12, 2017
TV-ga caalamiga ah ee ESAT ayaa waraysi dhinacyo badan taabanaya layeeshay Mudane Jamaal Diiriye oo horaan uga mid ahaan jiray baarlamaanka wadanka gumaysiga Itoobiya.
Mudane Jamaal oo ah rugcadaa siyaasada Itoobiya aad uyaqaana ayaa sheegay in kooxda talada wadanka afduubatay ee TPLF ay kufashilantay maamulka wadanka, wuxuuna xildhibaanku sheegay in fashilka TPLF uu soobilowday kahor bakhtigii kaligii taliye Malis Zinawi.
Ex xildhibaan Jamaal Diiriye ayaa sidoo kale sheegay in kooxda TPLF iyo ciidamada ay ku adeegato ay xasuuq kagaysteen dhulka Soomaalida Ogadenia, wuxuuna mudane Jamaal sheegay in jeelasha Ogadenia kuyaala ay dad laciirciirayaan.
Sidoo kale xildhibaanka ayaa dowladaha caalamka ugu baaqay in wax muuqda laga qabto dhibaatooyinka aan kala joogsiga lahayn ee kajira wadanka Ogadenia iyo guud ahaa wadanka Itoobiya, sidoo kale mudane Jamaal ayaa hay’adaha xuquuqul insaanka kacodsaday in ay caalamka ubandhigaa dhibaatooyinka lagu hayo shacabka Ogadenia iyo shucuubta kala duwan ee Itoobiya.
Dhinaca kale mudane Jamaal Diiriye kasheekeeyay dhaqanka soo jireenka ah ee xukuumadihii soomaray talada wadanka Itoobiya, wuxuuna sheegay in kali talisyaashii wadanka isaga dambeeyay ay kala dhaxleen gumaadka shacabka iyo boobka hantida shacabka.
Mudane Jamaal ayaa sidoo kale sheegay maamul xumadii kooxda TPLF in ay dhashay amaan xumada iyo kacdoonada wadanka kajira, sidoo kale mudane Jamaal ayaa sheegay in maamul xumada kooxdu ay keentay abaaro iyo cuduro joogta ah oo wadanka aafeeyay.